Yeremiya 49 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
49 Ngabo oonyana baka-Amoni+ utsho uYehova ukuthi: “USirayeli akanabo na oonyana, okanye akanayo na indlalifa? Kutheni na ukuze uMalekam+ amdle ilifa uGadi,+ nabantu bakhe bahlale kwizixeko zakwaSirayeli?”+ 2 “‘Ngoko ke, khangela! kuza imihla,’ utsho uYehova, ‘endiya kuthi ngayo ndivakalise ukuhlaba umkhosi kwemfazwe+ nxamnye neRabha+ yoonyana baka-Amoni; yaye ngokuqinisekileyo iya kuba yindulana eyinkangala ephanzileyo,+ needolophu eziphantsi kwayo+ ziya kutshiswa ngomlilo.’+ “‘Kwaye uSirayeli okunene uya kubadla ilifa abo babemdle ilifa,’+ utsho uYehova. 3 “‘Bhomboloza,+ Heshbhon,+ kuba iAyi iphangiwe! Dandulukani, zidolophu eziphantsi kweRabha. Bhinqani amarhonya.+ Yenzani isijwili, nibhadule phakathi kweentlanti zamatye, kuba uMalekam uya kuya ekuthinjweni,+ ababingeleli bakhe neenkosana zakhe, xa zizonke.+ 4 Kutheni na uzigwagwisa ngeentili, intili yakho equkuqelayo,+ ntombi ingathembekanga, wena ukholosa ngobuncwane bakho,+ usithi: “Ngubani na oya kuza kum?”’”+ 5 “‘Yabona, ndikuzisela into enkwantyisayo,’+ itsho iNkosi enguMongami,+ uYehova wemikhosi, ‘ivela kubo bonke abo bakujikelezileyo. Kwaye ngokuqinisekileyo niya kusasazeka, ngamnye aye kwelakhe icala,+ yaye akukho bani uya kubaqokelela ndawonye abo babalekileyo.’” 6 “‘Kodwa emva koko ndiya kubahlanganisa abathinjiweyo boonyana baka-Amoni,’+ utsho uYehova.” 7 NgoEdom utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Akusekho bulumko na+ kwaTeman?+ Litshabalele na icebo kwabo banokuqonda? Bubolile na ubulumko babo?+ 8 Sabani!+ Rhoxani! Yehlelani enzulwini ukuze nihlale,+ bemi bakwaDedan!+ Ngokuba lifikile ixesha lokuba ndimzisele intlekele ka-Esawu, ndiphethulele ingqalelo yam kuye.+ 9 Ukuba okunene kufike abavuni beediliya kuwe, bebengayi kushiya lubhikico na? Ukuba kufike amasela ngobusuku, ngokuqinisekileyo ebengenza umonakalo kuphela ngokokufuna kwawo.+ 10 Kodwa mna ke, ndiza kumhluba abe ze uEsawu.+ Ndiza kuzityhila iindawo zakhe ezifihlakeleyo,+ yaye akukho mntu uya kukwazi ukuzifihla.+ Ngokuqinisekileyo inzala yakhe nabazalwana bakhe nabamelwane bakhe baya kuphangwa,+ ibe akayi kubakho.+ 11 Shiya amakhwenkwe akwakho angenayise.+ Mna ndiya kuwagcina ephila, nabahlolokazi bakho baya kukholosa ngam lo.”+ 12 Kuba utsho uYehova ukuthi: “Khangela! Nangona ingelosiko labo ukusela indebe, nakanjani na baya kusela.+ Yaye wena, uya kushiywa ungohlwaywanga ngokupheleleyo na? Akuyi kushiywa ungohlwaywanga, kuba nakanjani na uya kusela.”+ 13 “Kuba ndizifungile,”+ utsho uYehova, “ukuba iBhotsera+ iya kuba yinto ekhwankqisayo,+ ungcikivo, impanziso nesiqalekiso; nazo zonke izixeko zayo ziya kuba ziindawo eziphanzileyo ukusa kwixesha elingenammiselo.”+ 14 Ndive ingxelo evela kuYehova, yaye kuthunyelwe umthunywa ezintlangeni, esithi: “Ziqokeleleni ndawonye, nize nxamnye nayo, nisuke nilwe idabi.”+ 15 “Kuba, khangela! eneneni ndikwenze wamncinane phakathi kweentlanga, wadeleka phakathi koluntu.+ 16 Ukutyhwatyhwa okubangeleyo kukukhohlisile, ukukhukhumala kwentliziyo yakho,+ wena uhlala kwiimfanta zengxondorha, ubambe ukuphakama kwenduli. Nangona wakhe indlwane yakho phezulu kanye njengokhozi,+ ndiya kukuhlisa apho,”+ utsho uYehova. 17 “UEdom umele abe yinto ekhwankqisayo.+ Wonk’ ubani odlula apho ngakuye uya kujonga ekhwankqisiwe aze abethe umlozi ngenxa yazo zonke izibetho zakhe.+ 18 Kanye njengasekubhukuqweni kweSodom neGomora needolophu ezimelene nayo,”+ utsho uYehova, “akukho mntu uya kuhlala apho, yaye akukho nyana womntu uya kuhlala apho njengomphambukeli.+ 19 “Khangela! Kuya kunyuka uthile kanye njengengonyama+ ephuma kwintshinyela engaseYordan isiya kwindawo yokuhlala eluqilima,+ kodwa ngephanyazo ndiza kumenza abaleke emke kuyo.+ Nonyuliweyo ndiya kummisela phezu kwayo. Kuba ngubani na onjengam,+ ingubani na noya kundicela umngeni,+ yaye nguwuphi na umalusi onokuma phambi kwam?+ 20 Ngoko ke liveni, madoda, icebo likaYehova aliqulunqileyo nxamnye noEdom,+ neengcamango zakhe azicingileyo nxamnye nabemi bakwaTeman:+ Ngokuqinisekileyo abancinane bomhlambi baya kurhuqwa. Ngokuqinisekileyo ngenxa yabo uya kuyiphanzisa indawo yabo yokuhlala.+ 21 Ngesandi sokuwa kwabo umhlaba uqalisile ukunyikima.+ Kukho isikhalo!+ Isandi saso sivakele nakuLwandle Olubomvu.+ 22 Khangela! Kanye njengokhozi uthile uya kunyuka aze ehle arhiwule,+ awolule amaphiko akhe phezu kweBhotsera;+ yaye intliziyo yamadoda anamandla akwaEdom okunene ngaloo mini iya kuba njengentliziyo yomfazi oneenkxwaleko ekuzaleni umntwana.”+ 23 NgeDamasko:+ “IHamati+ neArpadi+ zineentloni, kuba zive ingxelo embi. Zidilikile.+ Ulwandle lunenyameko yokuxhalaba; alukwazi kuhlala lungaphazamiseki.+ 24 IDamasko iphelelwe sisibindi.+ Ijikile ukuze isabe, yaye ibanjwe kukuphakuzela okupheleleyo. Ibanjwe kukubandezeleka nayinimba, njengomfazi ozalayo.+ 25 Kwenzeke njani na ukuba isixeko sendumiso singashiywa, idolophu yokugcoba?+ 26 “Ngoko ke abafana bayo baya kuwa kwiindawo zembutho, nawo amadoda emfazwe aya kwenziwa athi cwaka ngaloo mini,”+ utsho uYehova wemikhosi. 27 “Ndiza kuvuthisa umlilo kwiindonga zaseDamasko, yaye ngokuqinisekileyo uya kuziqwenga iinqaba zokuhlala zikaBhen-hadade.”+ 28 NgeKedare+ nezikumkani zaseHatsore,+ awazixabelayo uNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni,+ utsho uYehova ukuthi: “Sukani, ninyuke niye eKedare, madoda, nize nibaphange oonyana baseMpuma.+ 29 Iintente zabo+ nemihlambi yabo+ baya kuyithabatha, amalaphu eentente+ zabo nayo yonke impahla yabo. Neenkamela zabo+ ziya kuthatyathwa kubo. Kwaye ngokuqinisekileyo baya kudanduluka kubo bathi, ‘Kukho ukothuka macala onke!’”+ 30 “Sabani, balekelani kude; yehlelani enzulwini ukuze nihlale apho, bemi baseHatsore,”+ utsho uYehova. “Kuba uNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni+ uqulunqe icebo ngani yaye ucinge nengcamango ngani.” 31 “Sukani, madoda, ninyuke niye kulo uhlanga oluhleli ngokukhululeka,+ oluhleli ngonqabiseko!”+ utsho uYehova. “Alunazingcango lungenayo nemivalo. Luhleli lodwa.+ 32 Neenkamela+ zalo zimele ziphangwe, nenkitha yemfuyo yalo ibe lixhoba. Yaye ndiza kuluchithachitha emimoyeni yonke,+ abo baneenwele ezinquthuliweyo ezintlafunweni;+ yaye intlekele yalo ndiya kuyizisa ivela kwimimandla yonke ekufuphi nayo,” utsho uYehova. 33 “Kwaye iHatsore+ imele ibe sisikhundla soodyakalashe,+ inkangala ephanzileyo ukusa kwixesha elingenammiselo. Akukho mntu uya kuhlala apho, nanyana wamntu uya kuhlala kuyo njengomphambukeli.”+ 34 Lilo eli ilizwi likaYehova elafikayo kuYeremiya umprofeti ngokuphathelele uElam+ ekuqaleni kobukumkani bukaZedekiya+ ukumkani wakwaYuda, lisithi: 35 “Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Yabona, ndiyasaphula isaphetha sakwaElam,+ ukuqala kwamandla abo. 36 Ndiza kumzisela uElam imimoya yomine ivela kwiziphelo ezine zamazulu.+ Ndiza kubasasazela kuyo yonke le mimoya,+ yaye akuyi kubakho luhlanga bangayi kufika kulo abo baphangalalisiweyo+ bakwaElam.” 37 “Ndiza kuwaqoba amaElam phambi kweentshaba zawo naphambi kwabo bafuna umphefumlo wabo; kwaye ndiza kuwazisela intlekele, umsindo wam ovuthayo,”+ utsho uYehova. “Yaye ndiza kuthumela emva kwawo ikrele ndide ndiwatshabalalise.”+ 38 “Ndiza kuyibeka kwaElam itrone yam,+ nditshabalalisa apho ukumkani neenkosana,” utsho uYehova. 39 “Ngokuqinisekileyo kuya kuthi ekuphelenli kwemihla+ ndibahlanganise abathinjiweyo bakwaElam,”+ utsho uYehova.